Zvikonzero Nei Tichida Firm Mate Pasina Springs | Rayson
Zvikonzero Nei Tichida Firm Mate Pasina Springs
Saka zvinoshanda nenzira imwechete mumwaka miviri, asi imwe ndeyekuparadzira kupisa uye imwe ndeyekupararira kutonhora. Chimwezve chinhu chaunogona kutarisa kuti: Denga reLao rine solar rakanyorova, rinotenderera rinonaka, rinoshingairira kupisa kubva kuimba yekamuri, uye obva tachinjika zvakanaka, buritsa mweya unotonhorera mu sofa.
Iyo ESC Bhodhi yakaiswa zvakasimba mumuti. Iyo mota yemotokari yakabatana nenzvimbo yakakodzera inoratidzwa mumugwagwa wiring yedanho 1. mabhatiri anoiswa munzvimbo yavo uye yakabatana nedivi risina kunaka uye esc pane yakanaka kudivi rakanaka. Ini ndaishandisa kusundira.
Iwe uchaneta nekukurumidza pamhenderekedzo. Kana mutambi waneta, marudzi ese ekukuvara anowanzoitika zvimwe. Naizvozvo, vanhu zvakare vanofunga kuti vanowanzokuvadzwa pane lawn. Mutambo wacho zvachinja. Mubhora, inogona kufambisa nekukurumidza. Saka, chii nezve mwero wekukuvara pane lawn? Ivo vakanyanya kukwirira kupfuura huswa here?